Isizathu sombono we-El Niño siyatholakala | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo se-El Niño sihlaziyiwe amashumi eminyaka kulandela iphethini yezibalo ekhombisa ithonya lokuguquguquka kwesimo sezulu kumjikelezo wokulandelana kwalesi simo. Ngokwesifundo esisha esithuthukisa imodeli ebonakalayo esuselwa emazingeni wokuzamazama komhlaba nokunemba okuphezulu kokubikezela kusho lokho into ka-El Niño kufanele ibuyekezwe.
Isihloko salolu cwaningo sibizwa ngokuthi "Isixhumanisi esilahlekile esizukulwaneni se-El Niño" futhi salungiswa ngusosayensi waseSpain uFernando Mato kanye nomGreki uTheofilos Toulkeridis, futhi sashicilelwa kumagazini waso wakamuva yiphephabhuku elikhethekile elithi "Science of Tsunami Izingozi ". Ngabe ufuna ukwazi ukuthi lolu cwaningo lumayelana nani?
1 Izimfihlakalo zika-El Niño
2 Ubudlelwano phakathi kokuzamazama komhlaba
Izimfihlakalo zika-El Niño
Ngokusho kwababhali balolu cwaningo, kuye kwenzeka ukuthola esinye sezimbangela ezinkulu zokuthi kungani kwenzeka lesi simo sezulu. Kuze kube manje ukusebenza kwayo kuyaziwa uma iqala ukwenzeka, kepha ukubikezela kwakhe bekulokhu kunzima kakhulu.
"Lokhu kutholakala okokuqala okunika umsuka we-El Niño, kumele ushintsho lwento yonke ebikade icatshangwa ngaphambili bese kuba yizimo zezulu zomhlaba wonke," kuchaza uFernando Mato, PhD kwi-Telecommunications evela e-University of Vigo ( Spain) nomcwaningi we-Prometheus e-University of the Armed Forces ESPE eQuito.
Ubudlelwano phakathi kokuzamazama komhlaba
Kusukela lolu hlobo lomkhuba luqale ukufundwa, ucwaningo selugxile ekuhlobiseni le micimbi namazinga okushisa asolwandle, nomoya noma ingcindezi. Kodwa-ke, ukhiye wokutholwa kube ukucabanga kabusha le modeli.
Ubudlelwano bokuzamazama komhlaba bufundisiwe futhi ukutholakala okucacile kutholakele phakathi kokwanda okukhulu kokuzamazama komhlaba ezifundeni ezitholakale ePacific Plate (okubangelwe ukunyakaza kwe-telluric emikhawulweni yayo) futhi ukulandelana kwento ka-El Niño.
"Ibhande lasePacific lihlanganisa cishe amaphesenti angama-90 omsebenzi wokuzamazama komhlaba ezingeni lomhlaba futhi kunezifundo ezedlule ezathola ukuhlangana okuthile, kepha azikhombisanga kahle ukuthi buyini lobo budlelwano," kusho umcwaningi.
"Sifunde ingaphakathi lePacific Plate sathola ukuxhumana phakathi kwesimo se-El Niño lapho kwenzeka ngamandla noma ngokuqinile, ngokwanda kokuzamazama komhlaba ezindaweni ezithile ", ucacisile.
Njengoba umsebenzi wokuzamazama komhlaba wanda ePacific, kukhiqizwa inqwaba yamagume plume agcina ebusweni bolwandle. Lezi zimpaphe zinamazinga okushisa phakathi kuka-400 no-1200 degrees bese welula cishe amakhilomitha angama-800.
Ngenxa yalolu cwaningo, kuqinisekisiwe ukuthi ngeke kube khona into eyenzeka e-El Niño muva nje ngoba izimo ezifanele azikho lapho kungenzeka khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isizathu sombono we-El Niño siyatholakala
I-supervolcano yokulala iCampi Flegrei ingaba yingozi kakhulu kunalokho obekulindelekile
IPlutocene, noma ukuthi abantu bangawuguqula kanjani uMhlaba ube yindawo engemukeleki